स्कूल नर्सहरूले कसरी पुराना अवस्थाको साथ बच्चाहरूलाई मद्दत गर्दछ - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
मनोरञ्जन कल्याण औषधि बनाम मित्र औषधि जानकारी, समाचार समाचार, कल्याण कम्पनी, चेकआउट समुदाय औषधि जानकारी खेलहरु कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईंको बच्चाको स्कूलमा नर्सको कार्यालयसँग काम गर्दै
तपाईंको बच्चा हालसालै एक पुरानो स्वास्थ्य समस्याको साथ पत्ता लागेको छ वा केही समयको लागि एक विशिष्ट निदानको साथ बाँचेको छ भने, यो डरलाग्दो हुन सक्छ उनलाई वा उनीलाई प्रत्येक गिरावटमा स्कूल पठाउँदा। औसतन, बच्चाहरूले दिनको six घण्टा उनीहरूको प्राथमिक हेरचाहकर्ताबाट टाढा खर्च गर्दछ - जुन स्कूलको नर्सले सहयोग गर्न सक्दछ।
गर्भावस्था को बेला मुटुको धड्कन कस्तो लाग्छ?
यदि तपाईंको बच्चालाई दम, प्राणघातक एलर्जी, दौरा, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, वा अन्य पुरानो अवस्था रहेको छ भने, उसले स्कूलको दिनमा कुनै समय स्कूल नर्सलाई भेट्नु पर्ने हुन सक्छ। यो औषधि लिन वा मेडिकल प्रक्रियाहरूमा भाग लिनको लागि हुन सक्छ, जस्तै रगत ग्लुकोजको स्तर परीक्षण गर्न। त्यो भ्रमण कसरी सेट अप हुन्छ स्कूल नर्स र स्कूलको विशिष्ट नीतिहरूसँग तपाईंको सम्बन्धमा निर्भर गर्दछ। यहाँ कहाँ सुरु गर्ने हो।
तपाइँको बच्चाको निदान को बारे मा स्कूल लाई सूचित गर्नुहोस्।
तपाइँको लागि तपाइँको बच्चाको निदानको विशेषता र के को बारे मा जान्नु महत्त्वपूर्ण छ सक्छ मद्दत गर्न सकिन्छ। मतलब, नर्सहरूले कसरी तपाइँको बच्चालाई ब्यबश्थित गर्न सक्छन् भन्ने धारणाबाट सुरू गर्नुहोस् मधुमेह वा एडीएचडी स्कूल दिन को समयमा। त्यसोभए, त्यो स्कूलमा कुराकानी गर्नुहोस्।
तपाईंको स्कूलको औषधि प्रशासन नीतिहरू सिक्नुहोस्।
त्यहाँ कम्बल कथन छैन जब यो स्कूलमा औषधि प्रशासनको कुरा आउँछ। राज्यले स्कूल स्वास्थ्य को बारे मा नीतिहरु छ, तर स्कूल र स्कूल जिल्लाहरु पनि आफ्नो नीतिहरु को विकास गर्न सक्छ, Laurie Combe, आर एन, अध्यक्ष भन्छन् स्कूल नर्सहरूको राष्ट्रीय संघ । एउटा स्कूल जिल्लाले केवल प्रिस्क्रिप्शन औषधि स्वीकार्न सक्छ जबकि अर्कोले टाईलेनोल वा आइबुप्रोफेन जस्ता अत्याधिक काउन्टर तयारीहरूलाई अनुमति दिन सक्छ। प्रत्येक भवनमा स्कूल नर्सहरूको लागि कुनै राष्ट्रिय जनादेश छैन।
तपाईंको स्कूल नर्सले केहि औषधि प्रशासित गर्नु पर्ने कुरा जान्नको लागि उत्तम तरिका भनेको स्कूलको पुस्तिकाको सन्दर्भ वा जिल्ला नीति पत्ता लगाएर हो। केही स्कूलहरूलाई आवश्यक पर्दछ कि सबै औषधीहरू हालको प्रिस्क्रिप्शन लेबलहरूको साथ मूल प्याकेजि inमा हुनुपर्दछ। त्यहाँ कुनै खास नर्सको कार्यालय फारम हुन सक्छ जुन स्कूलमा निर्भर गर्दछ (वा नहुन पनि सक्छ) लाई बाल रोग विशेषज्ञ वा डाक्टरको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ।
स्कूल नर्सले के गर्न सक्दछ (र गर्न सक्दैन) निर्धारण गर्नुहोस्।
स्कूल नर्सको अफिसमा को काम गरिरहेको छ ठ्याक्कै पत्ता लगाउनुहोस् the कर्मचारी एक इजाजतपत्र प्राप्त नर्स वा अनुमतिविहीन सहायक कर्मचारी (युएपी) हो? एक पंजीकृत स्कूल नर्सको शिक्षा र प्रशिक्षण छ कि विद्यार्थी स्वास्थ्य को आकलन मा केन्द्रित छ र औषधि विज्ञान र औषधि विज्ञान मा प्रशिक्षण प्राप्त गरेको छ, Combe बताउँछ। उनीहरूसँग कानुनी जिम्मेवारीको एक समझ छ कि एक औषधिको प्रयोगको उद्देश्य के हो र कुन कार्यहरू औषधि लिन सकिन्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ, र के अनौठो साइड इफेक्ट चिन्ताको लागि एक कारण हुनेछ।
सोध्नुहोस् कि नर्सको कार्यालय कभरेज स्कूल दिन वा हप्ताको अवधिमा के हो। केही विद्यालयहरुमा हरेक दिन एक स्कूल नर्स हुन्छन्, जबकि अन्य विद्यालयहरुमा पंजीकृत नर्सहरू छन् जसले चार देखि पाँच स्कूलहरू व्यवस्थापन गर्दछन् र सायद प्रत्येक हप्तामा एक दिन हुन्छन्, कम्बे भन्छन्। अन्य विद्यालयहरूले इजाजतपत्र प्राप्त व्यावहारिक वा व्यावसायिक नर्सहरूको स्टाफ क्लिनिकहरूको निर्णय लिन्छन्, जसको रेजिष्टर गरिएको नर्स, मेडिकल डाक्टर, अस्थिचिकित्सा औषधी वा दन्तचिकित्सकको सुपरिवेक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ, जबकि अन्य स्कूल नर्सि offices अफिसहरू एक यूएपी द्वारा कार्यरत छन् (जसलाई यो पनि हुन सक्छ) एक स्वास्थ्य क्लर्क), जो एक इजाजतपत्र नर्स हैन।
कसले आमाबुवालाई हेरचाह प्रदान गरिरहेको छ भनेर जान्न र बुझ्न यो आमाबुवाको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि आमाबुवाहरूले के बनाउने तयारीको बारे थाहा पाउँदछन्, कम्बेले सल्लाह दिन्छ कि औषधी सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा दिइन्छ।
तपाइँको स्कूल नर्स जान्नुहोस्।
तपाइँको बच्चाले उचित चिकित्सा ध्यान पाइरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न कम्तिमा वर्षमा एक पटक स्कूल नर्ससँग जाँच गर्नु महत्वपूर्ण छ। अभिभावकले निश्चित रूपमा स्कूल नर्स खोज्नु पर्छ, भन्छन् लिंडा एल। मेन्डन्का , एमएसएन, स्कूल स्कूल नर्सहरूको नेशनल एसोसिएशन को अध्यक्ष छनौट जो विगत २ 24 बर्ष देखि एक स्कूल नर्स छ। तिनीहरूले सञ्चारको त्यो लाइन सुरू गर्नुपर्नेछ र विश्वासको राम्रो निर्माणको लागि विश्वास निर्माण गर्नुहोस्।
मेन्डन्का नोट गर्छिन्, नर्सि staff स्टाफसँग सम्बन्ध स्थापना गर्दा अवरोधहरू आउँदा अभिभावकलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। कहिलेकाँही अवरोधहरू पनि हुन्छन्, जस्तै जब केही चिकित्सकहरूको कार्यालयहरूले वार्षिक भौतिक [जसमा औषधीको जानकारीको साथ साथ आवाश्यक हुन सक्छ] को एक प्रति लिन्छ र त्यो आमा वा बुबालाई कठिनाइ हुन सक्छ, उनी भन्छिन्। हुनसक्छ नर्सले चिकित्सकको कार्यालयमा फोन कल गर्न सक्दछ र यदि यसको वरिपरि काम गर्ने कुनै उपाय छ भने पत्ता लगाउन सक्छ।
सञ्चार खुला राख्नुहोस्।
आदर्श रूपमा, यदि नर्सले बच्चालाई औषधि दिईरहेको छ भने, ऊ वा उनी आमा बाबुसँग नियमित सम्पर्कमा रहनेछन्, र यसो गर्दा प्रक्रिया सजिलो हुन्छ। यदि आमा वा बुबालाई थाहा छ बच्चाको लागी एक नशामा राम्रो प्रभाव पर्छ जुन सहिष्णु छ, यो नर्सको अफिसका लागि यो थाहा पाउनु राम्रो हो, कम्बे भन्छिन्। त्यसो गर्नाले यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्दछ जुन चलिरहेको, सहयोगी सम्बन्ध हुन सक्छ।
त्यो सहकार्य दुबै बाटोमा जान्छ, मेन्डोन्का भन्छिन्: स्कूल नर्सले प्रिस्क्रिप्सन कम हुँदै गर्दा आफ्ना अभिभावकलाई जानकारी दिन सक्दछन्, त्यसैले प्यारेन्ट यसलाई भर्न जिम्मेवार हुन सक्छन्। सञ्चार कुञ्जी हो।
म्याद सकिएको ह्याण्ड स्यानिटाइजर के गर्ने
metformin hcl र metformin er बीचको फरक
पेनिसिलिन को सामान्य नाम के हो?
रक्तचाप कम गर्न को लागी एक छिटो तरीका हो